HABAB DABIICI AH OO AY KHUBARADA CAAFIMAADKU QIREEN IN LAGAGA ADKAAN KARO DHIIG KARKA AADKA U SARREEYA | Saxil News Network
HABAB DABIICI AH OO AY KHUBARADA CAAFIMAADKU QIREEN IN LAGAGA ADKAAN KARO DHIIG KARKA AADKA U SARREEYA
Dhiigkarku waxa uu ka mid yahay dhibaatooyinka caafimaad ee ugu badan dunida maanta, si isku mid ahna khatar ugu ah rag iyo dumar iyo weliba da’aha kala duwan ee dadka, taas oo aad uga fog sidii hore looga bartay ee ahayd in uu ku koobnaado dadka da’da weyn o keliya. Waxaa xusid mudan in Dhiigkarku uu ka mid yahay cudurrada dhuunta ee in badan ay dhacdo in aanu qofku hore isugu ogaan, waxase jira calaamado guud oo lagu garan karo in kasta oo ay xanuunno kalana calaamado u noqon karaan, waxaana ka mid ah, madax xanuun, dawakhaad, neefsiga oo qofka cidhiidhi ku noqda, daal iyo burbur iyada oo aan hawl la qaban iyo mushkilado dhinaca aragtida ah.
Waxaa waajib ah in bilowgaba uu qofku u tago dhakhtar takhasus ah oo baadha sababta dhiigkarkan ku keentay, waayo dhiigkarku waa cudur khatar ah oo keena dhibaatooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin, qofka oo wadnaha uu dhiiggu ka xidhmo. Aragga iyo maqalka oo dhibaato ku timaaddo, dhaawac soogaadha kelyaha iyo mushkilado kale, sidaa awgeed dhiigkarka waxaa lagu naanaysaa dilaaga aamusan, khatarta uu keeno awgeed.
Caadi ahaan arrimaha dhiigkarka keena waxaa ka mid ah:
Warbixin Geeska Afrika turjumay oo lagu baahiyey shabakadda Health Mind Bodies ee arrimaha caafimaadka ka faalloota ayaa sheegaysa in qofka qaba dhiigkarku ay tahay in uu beddelo gebi ahaanba hab-nololeedkiisa, oo aanu ku tiirsanaan oo keliya dawooyinka kiimikada ah, oo keeni kara dhibaatooyin kale oo caafimaad. Waxa aanay khubaradu ogaadeen in dad dhiigkar qabaa markii ay si weyn wax uga beddeleen hab-nololeedkooda ay u suurtogashay in caafimaadkoodu uu soo gaadho heer aanay u baahan isticmaalka dawooyinka dhiigkarka.
Warbixintan shabakadda Health Mind Bodies oo uu Geeska Afrika ka soo xigtay Shabakadda Al-Carabiya waxa aynu ka soo qaadanaynaa habab dabiici ah oo uu qofku dhiigkarka kaga takhalusi karo:
In la badsado cunista cuntooyinka qaniga ku ah maadadda Bootaasiyamta oo jidhka ka caawisa in uu iska saaro cusbada saayidka ah, waxa ay si aad ah ula dagaallantaa dhiigkarka. Cuntooyinka Bootaasiyaamta lagu yaqaannana waxaa ka mid ah, Muuska, timirta, Afakaadhaha, Faasuuliyaha, Dabacsasaha iyo Shaaglaydhka madow.Dhammaad.